Football Khabar » वर्षको अन्तिम खेलमा रियल मड्रिड बराबरीमा रोकियो : बार्सिलोनालाई फाइदा !
वर्षको अन्तिम खेलमा रियल मड्रिड बराबरीमा रोकियो : बार्सिलोनालाई फाइदा !
स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा रियल मड्रिड वर्षको अन्तिम खेलमा बराबरीमा रोकिएको छ । गत राति भएको लिगको १८औं खेलमा रियल आफ्नै घरेलु मैदानमा पाहुना टोली एथ्लेटिक बिल्बाओसँग निराशाजनक गोलरहित बराबरीमा रोकिएको हो ।
यो बराबरीपछि रियललाई उपाधि होडमा झट्का लागेको छ भने शीर्ष टोली बार्सिलोनालाई सोझो फाइदा पुगेको छ । आफ्नै घरमा २ अंक गुमाएपछि रियलले बार्सिलोनासँग शीर्ष स्थानका लागि अंक बराबरी गर्ने अवसर गुमायो । अब विन्टर ब्रेकअघि बार्सिलोना रियलभन्दा स्पष्ट २ अंकले अघि रहेर शीर्ष स्थानमा छ ।
सान्टियागे बेर्नाबेउमा रियलले सुरुआतबाटै खेलमा पकड जमाएर खेले पनि गोल गर्न सकेन । रियलले खेल अवधिभरि बिल्बाओको पोस्टमा २० पटक आक्रमाण गर्दा ८ प्रहार टार्गेटमा हानेका थियो । तर, उसका कुनै पनि प्रहारले जाली चुमेनन् ।
रियलको निराशाजनक प्रदर्शनमा करिम बेन्जमा एक्लैले ८ पटक गोलका अवसर खेल फालेका थिए । त्यस्तै, भिनिसिय जुनियरलायत खेलाडीले पनि पटक–पटक अवसर गुमाएका थिए । यता, बिल्बाओले १ गोल गरे पनि सो गोल अफसाइड भएर रद्द भएको थियो ।
अब यो बराबरीपछि रियलको खातामा १८ खेलबाट ३७ अंक भएको छ । रियल बार्सिलोनाभन्दा स्पष्ट २ अंकले पछि छ । बार्सिलोना ३९ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ । पराजित बिल्बाओ २८ अंकसहित सातौं स्थानमा छ ।
प्रकाशित मिति ७ पुष २०७६, सोमबार ०८:२१